ကတိအတိုင်းဖျက်ဆီးပြပြီး တရုတ်လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သော "ဇ" သမား တစ်ဆိုင်လုံးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅သိန်း မြန်မာငွေ သိန်း၁ထောင် ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သူ... - ကတိအတိုင်းဖျက်ဆီးပြပြီး တရုတ်လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သော "ဇ" သမား တစ်ဆိုင်လုံးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅သိန်း မြန်မာငွေ သိန်း၁ထောင် ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သူ... Pages
ကတိအတိုင်းဖျက်ဆီးပြပြီး တရုတ်လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သော "ဇ" သမား တစ်ဆိုင်လုံးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅သိန်း မြန်မာငွေ သိန်း၁ထောင် ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သူ... ကတိအတိုင်းဖျက်ဆီးပြပြီး တရုတ်လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သော "ဇ" သမား တစ်ဆိုင်လုံးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅သိန်း မြန်မာငွေ သိန်း၁ထောင် ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သူ... swai son
iPhone ဝယ်ထားတာသိပ်မကြာခင် စက်ချို့ ယွင်းတာကို
ဆိုင်ကအပျက်မပြင်ပေးဘူး မဝယ်နိုင်ရင်မဝယ်နဲ့လို့ပြောခံရလို့ တစ်ဆိုင်လုံးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၅သိန်း မြန်မာငွေ သိန်း၁ထောင် ပေးပြီး ဖျက်ဆီးပြခဲ့သူ...
iPhone ဝယ်တာစက်ချို့ ယွင်းနေလို့ ပြင်ပေးပါလို့ဝယ်ယူသူလူငယ်ကပြောပြတာ ဆိုင်ကပြင်လို့မရဘူး ဒါဆိုရင်လှဲပေးပေါ့ .....
ဆိုင်က လှဲပေးလို့မရဘူး ..,.
လှဲမပေးရင် ငွေပြန်အမ်းပေါ့...ဆိုင်ဝန်ထမ်းက မနက်ဖြန်ဆိုင်ရှင်လော်ပန်းနဲ့လာတွေ့ပါလို့ ပြောလွှတ်ခဲ့ပါတယ်
ထိုလူငယ်က ညကတည်းက တရုတ်လူမူကွန်ရက်မှာရက်ပိုင်းပဲဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြင်မပေးရင် လှဲပေးရမယ်
လှဲမပေးနိုင်ရင် ငွေပြန်အမ်းခိုင်းတဲ့အကြောင်းစုံရင်ဖွင့်ပြီး ပြင်မပေး လဲမပေးပဲ ငွေပြန်မအမ်းပေးရင် တစ်ဆိုင်လုံးကိုကျသင့်စရိတ်ပေးပြီး ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်တင်ခဲ့တယ်
နောက်နေ့ဆိုင်သွားတော့ ပိုင်ရှင်လော်ပန်းက ပြင်လို့မရဘူး လဲလို့လဲမရဘူး ငွေလဲအမ်းမပေးဘူးဆိုပြီး ဘော့စိအထားနဲ့ပြောလိုက်တယ် ...ထိုလူငယ်က မင်းတို့စီပွားရေးလုပ်တာ ငွေမျက်နှာပဲကြည့်တာလား...?customer ကို စော်ကားတာလား...?
ဝယ်နိုင်ရင် အသစ်ဝယ်.....လို့ ထေ့ငေါ့ပြီး တုံပြန်လိုက်ချိန်မှာ
iPhone ၁၀လုံးစာ တရုတ်ယွမ် ၁သိန်း-မြန်မာငွေ သိန်း၂၀၀ နီးပါး
ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးဖျက်ဆီးမယ် ဘယ်လောက်လဲမေးတော့ ဆိုင်ရှင်က ယွမ်၅သိန်း-မြန်မာငွေ သိန်း ၁ထောင် ကတိအတိုင်းဖျက်ဆီးပြပြီး တရုတ်လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့သော "ဇ" သမား